Kambodza: ​​Mpitantara Antserasera Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2017 2:25 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Aogositra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Araka ny tatitry ny fikarohana iray navoakan'ny Pew Internet vao haingana, tsy mihevitra ny tenany ho mpanao gazety ny ankamaroan'ny bilaogera antserasera . Matetika dia tsy mahavita ny vitan'ny mpanao gazety izy ireo. Ahitana ireo andian'antsafa maromaro nataon'ireo olom-pirenena nomerika izay manao ny asan'ny fampitam-baovaon'ny olom-pirenena ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kambodziana.
Nanao antsafa samirery mba hilazany ny tantara momba azy i Chan Bopha , vehivavy Kambodziana any Japana. Iray amin'ireo fanontaniana maro izay nataon'i Chan Bopha ny hoe: “manana sipa ve ianao?” Ampahafantariny antsika ao amin'ny valinteniny fa tsy mamela ny vehivavy hanana sipa alohan'ny fanambadiana ny fiarovana ny kolontsaina any Kambodza, fa tsy toy ny ataon'ny olona any Eoropa.
Tamin'ny volana Aogositra, niresaka tamin'i Lim Borey , teratany Kambodziana , izay manohy ny fianarana ambony any Malezia i Vanndeth, mpianatra fampitam-baovao. Manome topi-mason'ny fiainan'i Borey ny antsafa amin'ny maha mpianatra miavaka azy eny anivon'ny oniversite. Izany dia zavatra tsy hitanao matetika any amin'ny gazety ao an-toerana.
Raha araka ny voalazan'ny tatitra fa tsy mahalala ny tantarany manokana, indrindra mikasika ny fitondrana Khmer Rouge izay namono olona an-tapitrisany maro ny tanora Kambodziana dia miezaka mamantatra ny zava-misy amin'ny alàlan'ny antsafa tanaty imailaka niarahany tamin'ny tanora bilaogera Kambodziana i ‘PR’ ao amin'ny Forver in Trasit . Fantatra ao anatin'izany fa Kambodziana mipetraka any Etazonia i PR , ary mampiasa ny herin'ny aterineto izy hanaovany antsafa tamin'i Kalyan, izay mpianatra any Kambodza mahay miteny Anglisy tsara.
Maro ireo tatitra nilaza fa faly ireo tanora Kambodziana, tsy mahalala ny tantaran'ny Khmer (indrindra fa ny Fotoan-tsarotra nandalovana tamin'ny vanim-potoana Khmer rouge), ary materialista be loatra ihany koa. Na dia teo aza izany rehetra izany dia hitako ny mifanohitra tamin'izany ho an'ny tanora Kambodziana izay nihaona tamiko. Matetika no tsapako ny talenta, ny hafanam-po, ny asa mafy, ny fomba fijery, ary ny fitiavan-tanindrazana izay hananan'ny tanora Kambodziana. Mifindrafindra ny fahatsapan'izy ireo ny fanantenana ho an'i Kambodza tsara kokoa sy ho an'ny ampitso tsaratsara kokoa. Asehon'izy ireo miharihary ny fitiavan-tanindrazany sy ny fireharehany amin'ny kolontsainy.
Nandefa fitantarana ny resadresaka nifanaovany tamin'ilay olona mitovy asa aminy, Mylinh Nakry Danh, izay miaro ny tranokala Khmer Krom Recipes i Phil Lees , teratany Aostraliana sady toniandahatsoratry ny tranokalam-bilaogy momba ny sakafo Kambodziana Phnomenon. Phnomenon no hany tranonkala miresaka momba ny sakafo Kambodziana, ary vao haingana izany no nivoaka tao amin'ny Best Asian Food Blog at AsiaPundit (Bilaogin-tsakafo Aziatika Tsara Indrindra).
Farany fa tsy ny kely indrindra, manana rohy maro kokoa momba ny antsafa nifanaovana tamin'ny bilaogera antserasera tao Kambodza teo aloha ilay bilaogera monina ao amin'ny firenen-kafa efa hatry ny ela, Jinja ao amin'ny ‘webbed feet, web log‘ .